ဖူးနုသစ်: သူတို့တွေ နားမလည်တဲ့ ဘာသာစကား
Posted by ZT at 1:46 AM
Thanks for sharing your experience. They are really funny and also interesting. LOL.
စလုံးတွေက တော်သေးတယ်ဗျာ။ သူတို့ တရုတ်လို ပြောလို့ ကိုက နားမလည်ရင် "မင်းတို့ အင်္ဂလိပ်လို ပြောင်းပြောလို့ ရလား" ဆိုမေးလို့ ရသေးတယ်။ အခု စင်္ကာပူမှာ လာလုပ်နေတဲ့ ပြည်ကြီးတရုတ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ခေါ်ထားတဲ့ ပြည်ကြီးတရုတ်တွေကမှ တော်တော် ဆိုးတယ်ဗျာ။ အိန္ဒိယတွေ ပြောတဲ့ Inglish ကမှ နည်းနည်းတော်သေးတယ်။ ပြည်ကြီးတရုတ် ပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားက ဘာပြောမှန်းကို အဓိပ္ပါယ် ကောက်မရတာ တော်တော် ဆိုးတယ်။
အဲဒီတော့ ဥရောပက လူတွေ အယင်က မေးသလို "Can you speak in English?" ဆိုတာကို အခု ကိုယ်က ပြန်မေးနေရတယ်။
ဒါလေးဖတ်ပြီးတော့ ပြည်ကြီးတရုတ်နဲ့ တိုးမပေါက်တဲ့အကြောင်းတွေ တွေးမိသွားတယ်။